Xasan Sheekh oo ka digay mudo kororsi loo sameeyo hay’adaha dastuuriga ee dowladda – Radio Daljir
Diseembar 5, 2019 8:04 b 1
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arimaha Doorashooyinka dalka ayaa ka digay in muddo kororsi loo sameeyo hey’adaha dastuuriga ee dowladda qaarkood.
Xasan Sheekh Maxamuud,Qoraal dheer oo bartiisa Facebook ku soo daabacay ayuu kaga hadlay taariikhda doorashooyinka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1964 illaa 2016, isagoo ka digay in ay dhacaan muddo kororosi la doonayo in lagu sababeeyo duruufo aanay doorasho lagu qaban karin.
“Iyadoo baryahaan Golaha Shacaba ee baarlammaanka ka doodayo xeerka doorashada JFS, in siyaasiyiinta qaarkood iyo dad sheegta iney qubaro yihin ay ku doodayaan ifinta Waddo suurtagalineyso in la sammeeyo KORORSIIMMO xilliga hay’adaha dastuuriga qaarkood iyadoo lagu sababeynayo haddii ay dhacaan duruufo aan doorasho laga qaban karin. Lix bilood ayaa doorashada dib loo dhigayaa haddii ay dhacaan duruufahaas – kuwaas oo aan la garaneyn waxa ay yihiin. Haddii lix bilood looga bixi waayana, baarlammaanku waa joogayaa ee madaxda ayaa la dooranayaa. Baarlammanku wuxuu joogayaa markaas ilaa xilli aan la garaneyn isna” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in mudo kordhin loo sameeyo hay’adaha Dastuurigaa dalka ay ka hor imaanayso Dastuurka KMG ee dalka.
“Kororsiimo hay’adaha dastuuriga ah waxay ka hor immaaneysaa dastuurka JFS ee aan ku dhaqaanno. Sidoo kale kororsiimadu waxay ka hor immaaneysaa xaqa dastuuriga ah ee ah muwaaddinku in la doorto iyo inuu wax doorto” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Ugu dambayn waxa uu ugu baaqay hay’adaha sharci dajinta iyo Xildhibaanada Faderaalka Soomaaliya in ay dowraan dastuurka dalka u yaala iyo waxa ay u dhaarteen.
“Waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxda hay’adaha dastuuriga ha ilaaliyeen dhaqanka dimiqraadiga ah ee curdanka ah ee dalkeenna. Sidoo kale xildhibaannada baarlammaanka federaalka ee jamhuuriyadda ha dhowreen dhaartii ay dhaarteen iyo wixi ay u dhaarteen ee ummaddu ku aamintay”.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo Cod ah sanada 2020/21,waxaana beesha Caalamka iyo Madaxda Xisbiyada dalka uga baaqeen Dowlada Soomaaliya in ay dajiso nidaam doorasho oo daahfuran.
Kenya oo xayiraad saartay duullimaayada Kismaayo
KAN AAN ARKAA WELI MA CID BAA WAX KA DHAGAYSATA!!!!?.
WAA TUUG AFAR KABOODLE AH OO XITAA JARDIINOOYINKII XARAASHTAY!!!,..